Ujeedadda shirka Minnesota ee aqoonyahanka Samaroon !! by Hussein A Egeh « SAWNEWS NETWORK
« Roob Lagu Diirsaday Oo Maanta ka Da’ay Borama
SHIR BALAADHAN OO AY ISKU YIMADEEN JAALIYADDA SALAL IYO AWDAL EE SWEDEN(Sawiro) »
Ujeedadda shirka Minnesota ee aqoonyahanka Samaroon !! by Hussein A Egeh
Posted by Sawnews.tk on February 6, 2010
Caadi bay u tahay dawladaha Africa inay hor ordaan dad aan aqoon badan lahayn oo danaystayaal ah. Dadkaasi mar walba waxay ka baqaan oo iska ilaaliyaan dadka aqoonta leh, “ the power of pen and the power of intellect”. Africa way dishay ragoodii ay ka mid ahaayeen, Lamamba, Saro-wiwa iyo kuwo badan oo kale. Sababtoo ah aqoontooda ayay ka baqayeen. Dhuuni raaca ayaa dilay oo maantana Africa halkaa ay joogto ka dhaajin waayay. Danaystayaashu ma haystaan aqli hoggaamiya ee waxa hoggamiya hungurigooda oo aad u fidsan. Dadkaas waxa ka mid ah Mohamed Xasan Mataan nin la yidhaa oo ka ku sheegay shirka Minnesota in Kulmiye ka danbeeyo. Waxa Kale oo uu ku dheeraaday dawladda Somaliland oo samaroon madax ka yahay. Labadan arrimood oo graraad gaabiyi ka muuqato aan si gaaban uga jawaabo.
Arrinta shirka Minnesota waxay ahayd arrin ka timid aqoon yahanno iyo indheer garad badan oo ku nool North America. Ujeedadu waxay tahay in gorfeeyo waxay tahay Maxadnimada fiicani. Taasina waxay dan u tahay qof kasta oo ummad hoggaan u noqonaya. Indheer garadka Samaroon way ka horreeyaan arrimahan hoose ee Somaliland, Axsaab ku-sheegooda iyo aragtida taalla qaadka dushiisa. intayar ee Axsaabtaa kala raacsani ama ku muranasni waxa madaxa ka galay qabyaalad ay qof ku tageerayaan, qayba kalana waxay noqon karaan daynaystayaal. Labadaas qayboodna laguma tiriyo indheer garadka Samaroon waanay tilmaaman yihiin. indheer garadka runta ahi waa ka danta guud oo danaysi ku jirin ku socda . Qoomiyad walibana xaq bay u leedahay inay ka hadasho kolba wixii jira ee danhahooga ah. Intooda badani maba rumaysana Axsaab ku-sheeggan aad ha ka hadashay iyo heerkaa aad joogto adiga qaar kula mid ihiba. Waxanay u rumaysnayn waxa iska leh Qabiil keli ah. Markaa ma noqon karaan wax ta tarjumaya isku jirka dadka waddanka.
Arrinta labaad ee madaxnimada Somaliland been buu ka sheegay Moahamd. Mohamed muu garan waxay dawladi tahay. Dawlad waxa la yidhaa Barlamaanka dalka, “ Legislative Body”. Halkaa ayaa laga fuliyaa sida dalka loo hoggaaminayo. Halkaa Samaroon 12 qof oo keliya ayuu leeyahay oo ah boqolkiiba toban ama sagaal. Hadday intuba ka baxaan golaha waxay diideen wuu fulayaa. Maxay markaa madax ka yihiin?
Malaha waxad eeganaysaa ina Rayaale oo joogitankiisu yahay nin lagu xalaashaday xaqdarrada beeshaada lagu hayo. Waad ogtahay inuu yaya in la haysto oo dhinacna ka ah dhuuni raac sidaada oo kale Mohamedow. Danahayagii, magacayagii iyo dhulkayagiiba wuu gatay. Idinka oo kale horeba way u jirayeen taariikh xun baana ka hadhay. Idinkuna buugaas baad ku qoranteen.
This entry was posted on February 6, 2010 at 10:43 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.